Xukuumadda Oo Sii Daysay Laba Haween Ah Iyo kanada Oo Muwaadiniinteeda Uga Digtay Somaliland﻿ | Hayaan News
Xukuumadda Oo Sii Daysay Laba Haween Ah Iyo kanada Oo Muwaadiniinteeda Uga Digtay Somaliland﻿
April 25, 2019 - Written by editor editor
Hargeysa(Hayaannews) Xukuumadda Somaliland ayaa xabsiga ka sii daysay laba dumar ah oo magaalada Hargeysa ku xidhna saddexdii bilood ee u dambeeyay. Haweenka ayaa lagu xukumay xabsi dhan laba bilood iyo badh kadib markii lagu eedeeyay in ay isticmaaleen daroogo.
Qareennada difaacayay iyo dumarka ayaa diiday in ay isticmaaleen mukhaadaraad mamnuuc ka ah Somaliland waxaanay ku doodeen in aan laga helin wax maandooriye ah gurigii laga soo qabtay laakiin, dhawaan ayay si joogta ah warbaahinta Canada wax uga qortay arrinta dumarkan taas oo keentay in xeer ilaalinta Somaliland kiiska ka noqoto lana sii daayo.
Wargeyska Globe and Mail oo ka soo baxa dalka Kanada oo arrintan markii u horaysay wax ka qoray ayaa sheegay in dawladda Kanada, safiirka Somaliland ee dalka Ingiriiska Ayaan Maxamuud iyo Garyaqaan Guuleed Axmed Jaamac (Dafac) u xaqiijiyeen sii daynta labada dumarka ah lagana noqday kiiskii loo haystay.
Dawladda Canada ayaa wargeyska u sheegtay in ay gacan ka gaysatay sii daynta labada dumarka ah oo kala ahaa Maymuuna Cabdi oo 28 jir ah iyo Karima Watts oo 23 jir ah kuwaas oo Somaliland u yimid hawlo la xidhiidha la dagaallanka tacadiyada haweenka.
Dawladda Canada oo aan aqoonsanayn Somaliland ayaa ku tilmaantay dawlad iskeed ugu dhawaaqday madax bannaani oo citiraaf raadis ah waxaanu wargeyska Globe And Mail sheegay in dawladda Canada dhammaan muwaadiniinteeda uga digtay u socdaalidda Somaliland iyo Soomaaliya iyada oo kula talisay in aanay u socdaalin loona qabsan karo madax furasho lacageed.
“Dhammaan Ajaaniibtu waxay halis heerkeedu sareeyo ugu jiraan in lagu afduubto guud ahaan Soomaaliya oo ay ku jirto Somaliland. Dhawr qof oo ajaanib ah oo arrimo bani’aadanimo ka shaqaynayay ayaa la afduubtay,” Sidaas ayuu wargeysku ka soo xigtay Bogga dawladda Canada ee talooyinka siiya muwaadiniinteeda.
Ma cadda in digniintani la xidhiidho kiiska labadan dumar ah oo ay si weyn indhaha ugu hayeen todobaadadii u dambeeyay warbaahinta Canada iyo ururada xuquuqal iinsaanku.